ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမိုးရာသီစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော် – ထူးဖေါင်ဒေးရှင်း
HTOO Foundation Media, May 26, 2017 April 27, 2018 , ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေး, 0
ထူးဖောင်ဒေးရှင်း မိုးရာသီစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်နှင့် “ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး” ဟောပြောပွဲကို (၃.၈.၂၀၁၃) ရက်နေ့ကလှော်ကားဥယျာဉ်၊ ရေပြာကန်အနီးတွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းအနေဖြင့် ပျိုးပင်ပေါင်း (၁၃၀၀) ကျော်ကိုထူးဖောင်ဒေးရှင်း အဖွဲ့ဝင်များမှတပျော်တပါးစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်း၏ CEO ဦးပေါ်မြင့်ဦးကသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ အကြံပေးဖြစ်သူ ဒေါက်တာဦးသိန်းအောင်မှ “ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆက်လက်ဟောပြောပေးခဲ့ပါသည်။.
ဘိုကလေးမြို့နယ်ဆေးရုံသို့ Ultrasound နှင့် Diathermy စက်များလှူဒါန်းခြင်း
webmaster, August 18, 2013 December 13, 2017 , ကျန်းမာရေး, ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေး, 0
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဘိုကလေးမြို့နယ် ခုတင်(၁၀၀)ဆေးရုံတွင် လိုအပ်လျက် ရှိသော Ultrasound စက် (၁)လုံးနှင့် Diathermy စက် (၁)လုံးတို့ကို ၁၈.၈.၂၀၁၃ ရက်နေ့က သွားရောက်လှူ ဒါန်း ပေးခဲ့ပါသည်။ လှူ ဒါန်းခြင်း အခမ်းအနားတွင်...
HTOO Foundation Media, May 27, 2018 June 22, 2018 , ပညာရေး, ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေး, 0
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းပညာဒါနဘော်ဒါဆောင် (ပူတာအို) ၏ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနား။ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ပညာဒါနဘော်ဒါဆောင် (ပူတာအို) ၏ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ပညာရည်ချွန်ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို (၁၁.၇.၂၀၁၃) ရက်နေ့က ပူတာအိုမြို့၊ ဒုတ္ထန်ရပ်ကွက်ရှိ ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ပညာဒါနဘော်ဒါဆောင် ဧည့်ခန်းမတွင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့...
HTOO Foundation Media, May 26, 2017 June 29, 2018 , ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေး, 0
၀၁၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် မြန်မာ အာဆီယံ အမျိုးသမီးများချစ်ကြည်ရေးအသင်းမှ ကြီးမှူးကျင်းပသော အိုင်းရင်းခရောစ့် စင်တင်တေးဂီတပွဲတွင် ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ နေပြည်တော်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမတောင် ရေတွင်းတူးဖော်နှင့် ရေမော်တာတပ်ဆင်နိုင်ရန် အလှူငွေကျပ်သိန်း(၁၀၀) လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
webmaster, September 4, 2013 December 13, 2017 , ပညာရေး, သတင်းများ, ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေး, 0
(၃၁.၃.၂၀၁၃) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Michael Learns to Rock တေးဂီတပွဲအတွက် Bagan Entertainment မှစက်များ (sound system) ငှားရမ်းခြင်းမှရရှိသည့် ငွေကျပ်သိန်း (၈၀)အား ထူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ တဆင့်နေပြည်တော် ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်အတွင်းသောက်သုံးရေ...
webmaster, November 28, 2017 December 13, 2017 , ဒေသန္တရဖွံ့ဖြိုးရေး, 0
ထူးဖောင်ဒေးရှင်းသည် အင်းလေးကန်အတွင်းသို့ စီးဝင်သော ချောင်းများမှတဆင့် ကန်အတွင်းသို့ နုန်းကျခြင်းလျော့နည်းစေရန်၊ အင်းလေးကန်ဝန်း ကျင်တောင် တန်းများ ပြန်လည်စိမ်းလန်းလာပြီး မြေဆီလွှာပျက်ဆီမှုထိမ်းသိမ်းစေရန်နှင့် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှုလျော့နည်းပပျောက်စေရန်၊ ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် သစ်တောသစ်ပင်များချစ်ခင် တန်ဖိုးထားတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် ကန်တော်ရွာအနီးတွင်...
ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းခြင်းအခမ်းအနားပြေးခုန်ပစ် အားကစားအောင်မြင်ရန်အတွက် ယူဒါန်းခြင်း
မြေညီထပ်၊ ကွန်ဒို (A)
ဖုန်း: (၉၅၁) ၆၅၅၂၇၂, ၆၅၅၂၈၂
ဖက်(စ်): (၉၅၁) ၆၅၅၂၉၂
©2020 ထူးဖေါင်ဒေးရှင်း. မှတ်ပုံတင် ဆောင်ရွက်ပြီး.